Lapho ingane iba yintsha, kuyadingeka ukuba athenge umbhede omusha. Izingane ezikhulile zizama ukushintsha isimo esizungezile, ukunikeza igumbi lawo isitayela esithile. Zinezinto ezizithandayo nezidingo zabo.
Ngaphezu kwalokho, imibhede yezingane yabasha kufanele ikhululeke futhi ikhwalithi. Ngemuva kweminyaka yonke ezinjalo izingane ezingumgogodla, idivayisi esisekelayo, isibalo sisekhona. Izingane ezisencane zibambe iqhaza ezemidlalo, emidlalweni, emidlalweni futhi zidinga ukuphumula okugcwele. Ngenxa yalokhu, udinga ukukhetha umkhiqizo onesizinda esiphakeme, umthamo wama-orthopedic, osemusha amamodeli wesayizi owodwa nengxenye azohambisana.
Izinketho zokulala kwezingane
Uma ukhetha ukubukeka kombhede, kudingeka ucabangele ubulili bomntwana, ukuthanda kwakhe nokuzilibazisa.
Ngentombazane yentsha, umbhede osesitayela se-Romanticism noma iProvence ulungile. Kuyoba kuhle ukubukeka njengombhede nge-velvet noma i-satin ehlanganiswe ne-headboard. Ukuhlobisa umbhede kungaba yindwangu yomoya, amakhethini ohlangothini zombili, ugcwalise ukuhlobisa ngamapayipi amancane. Lilac noma pink pink, white - imibala ethandwa kakhulu izingubo ekamelweni lentombazane. Izindwangu ezimnandi zinikeza ubuhle be-interior kanye ne-chic. Udlala indima enkulu ekamelweni lentombazane yentombazane bese ehlukanisa nanoma yisiphi esinye isimo.
Manje imfashini isitayela seParis esinemifula yaseFrance esemadolobheni emnyama nasemhlophe ezindongeni, ngoba le ngaphakathi ingumbhede omuhle owenziwe ngokuvula umbala ngekhanda elibomvu elimnyama noma elimhlophe.
Abafana abasebasha ngokuvamile badonsela isitayela esingakahleleki, ngoba umbhede onokuqedela ngamapulangwe otholile ufanelekile ngaphandle kwemigqa ekhethekile. Ifenisha enjalo ifanelana ngokuphelele nesitayela saseNew York. Ubuso obunzima bombhedeni bungase buhlanganiswe ngokubukwa komdwebo wegraffiti ezindongeni zegumbi.
Kwabafana, ukulandelela imibhede noma izitezi ezimbili "izakhiwo" ezinezitebhisi zecala zifanelekile. Ukuhlukahluka kwefenisha kufanelana kahle nama-cabinets, futhi kumgqa ophansi we-model loft, ungafaka phezulu kwetafula ngetafula lekhompyutha.
Ngisho nombhede onobudlova owenziwe ngama-pallets enkuni, odwetshwe omnyama, ngengubo ebomvu noma eluhlaza okwesibhakabhaka angagcizelela isitayela segumbi. Ngesizo sakhe, ungashintsha ingane yombhede kumbhede onesibindi.
Amantombazane afana nemibhede ephezulu esebenzayo ngamapulatifomu ahambayo kanye nabadwebi, ngisho nasenhloko yamamodeli ongathola amatafula amancane.
Okukhangayo kunazo zonke kuyisitayela esiphezulu. Kusho ubuncane befenisha, imigqa elula nemibala - emhlophe, emhlophe, emnyama ngokuhlanganiswa okuzwakalayo.
Ukulala kwentombazane engaphakathi
Indawo yombhede ibaluleke kakhulu ngaphakathi. Ungayifaka engxenyeni eyinhloko yedonga, ukuhlobisa ikhanda nge-tulle noma izithombe, amaphosta, ukudweba okunomdwebo.
Yenza umbhede endaweni ekhona ekhona ekamelweni. Kulolu cala, lungahle lufakwe ngamashalofu, abadwebi, i-mezzanines kanye nefenisha yokusebenza eyinkimbinkimbi.
Umbhede ungafakwa ekhoneni futhi uhlolwe ngokuma okuphezulu ngamaseli. Emashalofini anjalo kungcono ukuhlela izesekeli ezitokisini, amadivaysi okukhanyisa, ama-knack-knacks ahlekayo.
Imiklamo ehlelekile yemibhede yabasha izosiza ukuhlangabezana nezidingo zomuntu okhulayo ekuziphenduleleni ngokwabo, ukuxhumana okusebenzayo nokuphumula okugcwele. Igumbi lomfana akuyona nje umbhede. Kulo mphupho futhi ikhula. Umbhede omuhle uzomsiza ingane ukuba idale imvelo yesimanje, ihlomise isikhala sayo, lapho ezoba nenjabulo enkulu.
Ukukhanyisa ebhodini - indlela efanele yokubeka kanye nokuqoqa izakhiwo?
Ukuhlanganisa izindonga zephepha lodonga
I-closet ye-plasterboard enezicabha
IKhabhinethi yase-Wall yezangaphakathi zanamuhla
Izithombe ze-MDF kwifilimu ye-PVC
Tile for the facade yendlu
Kungani ingane ingalali ebusuku?
I-Pea puree - zokupheka ngesidlo esihlwabusayo nesiphephile somndeni wonke
Ikhekhe kusuka ku-profiteroles
I-T-shirt ephathekayo 2013
I-albhamu yengane esanda kuzalwa
Yimaphi amajazi azoba emfashini entwasahlobo ka-2016?
Clexane ngesikhathi sokukhulelwa
UNkk Campbell wanikeza incwadi yakhe ngezithombe ezifanele
Ngingakwazi yini ukuqina ngesikhathi sokukhulelwa?
Indlela yokufundisa ingane ukufunda iminyaka engu-6?
UJennifer Garner utshele ngesikhalazo enomntanakhe kanye nesahlukaniso kumyeni wakhe
Igazi ngemva kokuya esikhathini
Izimbali ezivela enhlama ngezandla zazo